umxube wokutya oyithengisayo,umatshini wokuxuba iinkomo,umxube wokutya othe tye
Chwetheza:Umatshini wokudibanisa othe tye
Umthamo:800~ 1200kg / h
Umatshini wokuxuba okondla inyathelo eliphambili isityalo sokwenza ukutya kwepellet ngenxa yempembelelo yayo ngqo kumgangatho weepellets zokutya. Oomatshini bokuxuba bokuphaka benziwa ukudibanisa ngokulinganayo iintlobo ezahlukeneyo zempuphu ekrwada kwaye ngamanye amaxesha izixhobo zokudibanisa ulwelo ziyimfuneko ukuze zisetyenziselwe ukongeza izithako zesondlo kulwelo ukudibanisa okungcono. Emva kokuxuba kakhulu, Izixhobo zilungiselela indlela yokuveliswa kweepellets zodidi oluphezulu. Oomatshini bethu bokuxuba abakhethekileyo abakhethekileyo bayakonwabela ukuthandwa kwimarike.Ukulungisa kungaphucula ukufana kwamasuntswana enza isando somatshini ukuwagcina kubunzima benxalenye, oluphucula ngokuthe ngqo umgangatho wemveliso. Ke umatshini wokuxuba iinkomo sisixhobo esibalulekileyo ngaphakathi ukuveliswa kwepellet. umxhesho wokutya kweenkomo ngomngxunya omnye kunye namawele-ubambo anikezelwa yinkampani yethu, ikwabizwa ngokuba yiribhoni blender, isetyenziselwa ikakhulu ukuxuba umgubo wefomure yokutya ukuze kuqinisekiswe umgangatho ophezulu wokutya okuhlanganisiweyo. Kwaye lo mxube wokupheka wenkukhu ngumxube oxutywe kakuhle owenza intlanzi kunye nezinye izityalo zokuvelisa ukutya kwimfuyo.
Iimpawu zomxube wokutya
1. I-homogeneity ephezulu: olu hlobo loyilo lokudibanisa umxhesisi omnye luqinisa ukuhanjiswa, ukucheba, kunye nemiphumela yokudibanisa.
2. Ukuxuba ngokuphakathi kunye nokufana okuphezulu, akukho lucalucalulo.
3. Ngobuntu: Isakhiwo esilula nesengqiqweni, ulondolozo olululo, inokuthenjwa, khuselekile, esebenzayo kunye notyalo mali elincinci. Umxube wokutya unokuxhotyiswa ngejacket yokufudumeza izibonelelo kunye nezinto zokupholisa. Ngaxeshanye, Izinto zokufakelwa kobushushu zinokufakwa njengoko kufuneka.
4. Ukusetyenziswa ezininzi: lo mxube wokutya weenkomo unokusetyenziselwa ukuxuba ukutya, izongezo zokutya, isibhengezo, irabicic irabha, pigment, uyinki yokuprinta, iparafini, resin, Ukuphelisa i-cream, ioyile, isitshisi, njl; kwaye inokusetyenziselwa ukudibanisa i-viscous fluid kunye nobukhulu, izixhobo zepastiy kunye nezihombozelwe.
5. Isetyenziselwe ukudityaniswa kwe: Iipuphu nge powders; i powders ngotywala
6. Uyilo olukhulu oluvulekileyo, ukutya okukhawulezayo, indawo encinci, Ukuhlangabezana neemfuno zokongeza ulwelo.
UkuSebenza kunye nokuLunga koMatshini wokuDibanisa uMxube
Emva kokuqala komxube, Jonga indlela ebaleka ngayo ngexesha ukuphepha ukubuyela umva.
♦ Umthwalo womxubi akufuneki udlule ivolumu efanelekileyo.
Emva kokuyisebenzisela 15 imihla yexesha lokuqala, khupha ioyile yokuthambisa kwaye ucoce itanki yeoyile; tshintsha ioyile yokuthambisa kwisantya sokunciphisa ngokukhawuleza iinyanga ezintathu, kwaye gcwalisa igrisi kwimveliso rhoqo kwiinyanga ezimbini.
Repair Ukulungiswa kancinci komxube kuxuneka emva 1800 iiyure 'ezisebenzayo eziqhelekileyo, ubukhulu becala ukujonga indawo yokuthambisa okanye ukubuyisa indawo yokunxiba; ukuguqula ngaphezulu kuyafuneka emva 4000 iiyure 'ezisebenzayo eziqhelekileyo, ubukhulu becala ukungasebenzi kufuneka ujonge kwaye ucoce onke amalungu, buyisela okanye ulungelelanise onke amalungu enxibe kunye neenxalenye ezisemgangathweni.
Ukuxutywa komxube wokutya okhoziweyo
3 150kg / ibatch
5~ I-8min / ibatch
4 250kg / ibatch
10~ 15min / ibatch
5.5 500kg / ibatch
7.5 1000kg / ibatch
15 2000kg / ibatch